Ogaden News Agency (ONA) – Madaxweynaha China oo Xilka korodhsaday & Xadeynta xilka oo la laalay.
Madaxweynaha China oo Xilka korodhsaday & Xadeynta xilka oo la laalay.
Posted by Wariye Qaran	/ March 14, 2018
Kongareeska dalka China ayaa Axadii u codeeyey sharci cusub oo u ogolaanaya Madaxweynaha iyo kuxigeenkiisa in ay xilka hayaan inta ay nool yihiin.
Sharcigan cusub ee la hordhigay Kongareeska China ayaa ah mid uu doonayo Madaxweyne Xi Jinping inuu xilka ku kororsado kuna balaadhiyo awoodiisa.
Bedalaada shuruucda xadeenayey wakhtiga uu xilka heyn karo Madaxweynaha ayey xukuumada si qarsoodi ah ugu dartay qodobada sanadkan Kongareeska u codeenayey iyagoo ka dhigay qodobka 14aad, balse isbedalkan sharciga lagu sameeyey ayaa la ogaaday 25kii bishii Feberaayo markii saxaafada lagu shaaciyey dhamaan qodobada cusub ee sharciga dalkaasi lagu darayo.